Kevin de Bruyne Oo Abaal-marinta Xiddiga Sannadka Ee PFA Ku Garaacay 4 Ciyaartoy Oo Liverpool Ah Iyo Raheem Sterling | Kaafi News
Kevin de Bruyne Oo Abaal-marinta Xiddiga Sannadka Ee PFA Ku Garaacay 4 Ciyaartoy Oo Liverpool Ah Iyo Raheem Sterling
Xiddiga Manchester City ee Kevin de Bruyne ayaa ku guuleystay abaal-marinta xiddiga ugu wanaagsanaa guud ahaan Ingiriiska xili ciyaareedkii tegay ee 2020-21, waxaanu ku garaacay afar ciyaartoy oo Liverpool ah iyo Raheem Sterling oo ay isku koox yihiin.
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Manchester City ee De Briuyne oo hore ugu soo guuleystay abaalmarinta xiddiga Premier League ayaa mar kale sii watay guulihiisa shaqsiga ah, waxaana mar kale la siiyey abaal-marinta PFA ee xidhiidhka FA uu bixiyo.
De Bruyne oo ay la tartameen Virgil van Dijk, Sadio Mane, Trent Alexander-Arnold iyo Jordan Henderson ayaa dhamaantood ka dhex qaatay, kaddib markii uu xili ciyaareed layaab lahaa kusoo qaatay Premier League.Advertisements
Inkasta oo De Bruyne aanu ku guuleysanin wax koob ah marka laga reebo Carabao Cup, haddana waxa uu soo kabtay rikoodhkii gool-caawinta ee ugu badnaa Premier League abid ee Thierry Henry uu sameeyey oo ahaa 20 gool caawimood oo xili ciyaareed kaliya ah.
Kubbad-sameeyaha reer Belgium ayaa noqday ciyaartoygii ugu horreeyey ee Manchester City ah ee abaal-marinta PFA ku guuleysta taariikhda, waxaana ay ugu soo beegantay abaal-marintani xilli uu dhowaan noqday aabbe oo uu wali farxadda ilmihiisa yar la qaybsanayo qoyskiisa.
Hadal kooban oo uu sheegay De Bruyne ayaa yidhi: “Sharaf weyn ayay ii tahay abaal-marintani. Inay ciyaartoyga ugu wanaagsan iigu codeeyeen asxaabtaada iyo kuwii kula tartamayay ee kooxaha kale ee adiga kaasoo horjeeday waa wax cajiib ah. Waa wax layaab leh inaan ahay ciyaartoygii ugu horreeyey ee Manchester City ah ee ku guuleysta, sababtoo ah, dhamaan ciyaartoydii hore uga soo dheeshay halkani waxay ahaayeen kuwo wanaagsan, qaarkoodna illaa hadda way sii ciyaarayaan, laakiin way fiican tahay inaan kooxda metalo.”
De Bruyne ayaa xili ciyaareedkii hore ee 2018-19 uu dhaawac seejiyey abaal-marintan oo uu kula tartamayay difaaca Liverpool ee Virgil van Dijk oo haddana qayb ka ahaa lixda ciyaartoy ee kusoo baxay liiska gaaban oo ay ku wehelinayeen Jordan Henderson, Trent Alexander Arnold, Sadio Mane iyo Raheem Sterling.